Ukuthoba okukhulu kwexabiso lemali ngexesha lengxakeko ye-corona kukhokelela kwisiphumo se-hyperinflation: ngaba i-bitcoin isisombululo? : UMartin Vrijland
Ukuthoba okukhulu kwexabiso lemali ngexesha lengxakeko ye-corona kukhokelela kwisiphumo se-hyperinflation: ngaba i-bitcoin isisombululo?
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	13 Meyi 2020	• 22 Comments
"Imali yeFiat" okanye "imali ethembekileyo" yimali efumana ixabiso layo hayi kwizinto ezenziwe ngayo (ezinje ngeengqekembe zegolide nesilivere), kodwa ngokuzithemba ukuba inokusetyenziselwa ukuthenga iimpahla kunye neenkonzo. Ixabiso ke alisekelwanga kwisisindo esithile kunye nomxholo wensimbi exabisekileyo, kodwa kukuzithemba ukuba abaqhubi bezoqoqosho babeka ixabiso lemali.
Apho wawunayo ingqekembe yegolide okanye isilivere kwakudala, elo xabiso lalinxulunyaniswa nendlela ekhawulezayo kunye nokuba yimalini igolide okanye isilivere. Ngokwazisa imali yamaphepha, umatshini wokushicilela unokuvulwa. 'Ngemanani kwikhompyuter' imali, imigangatho yedola ye-OPEC kunye nekhonkco kwimveliso yeoyile bekufuneka ibonelele. Yonke loo migangatho yaphoswa ngaphaya kwentlekele ngexesha lentlekele.
Iibhanki eziphakathi ziprinta imali engenamda. Benza oku kuba ibango lemali liyanda. Ungathini na, njengorhulumente, ukubonelela ngazo zonke ezi phakheji zoncedo apho ufaka khona abantu imali ukuze baphile?
Kutheni ukugubungela imali kubaluleke kangaka?
Xa wawuseneengqekembe zesilivere negolide, ibango lalolo hlobo lwemali lakhula njengoko abantu babesiya besanda njengoko urhwebo lwalusanda. Oko kuthetha ukuba kuya kufuneka ubeneengqekembe ezininzi ukuze uzinqumle. Ndithenga imveliso yakho kwaye kwimbuyekezo ndikunika inani leengqekembe zegolide ngexabiso elithile. Ungathenga into oyifunayo kwezi ngqekembe zegolide.
Kuba wawusazi ngeloxesha ukuba yinkqubo ebanzi yokukhupha isilivere okanye igolide emhlabeni, uyazi nokuba imali iyongezwa, kodwa ke ukuba isidingo semali engaphezulu kwakungathethi ukuba ingqekembe iya kuvela ngequbuliso kwiveki. yayisisiqingatha sexabiso. Emva kwayo yonke loo nto, kwathatha ixesha kunye nomzamo ukukhupha ezo zixhobo emhlabeni kwaye zinyibilike zibe ziingqekembe. Ke ungayigcina ngokukhuselekileyo imali yakho okwethutyana ukuze uthenge into kwiveki ezayo, ngaphandle koloyikela ukuba ingqekembe yegolide yayixabisa isiqingatha.
Xa ezo mali zinzima zitshintshwa yimali yamaphepha, kwaba lula kakhulu. Iphepha kulula ukuprinta. Ukulungiselela oko, iibhanki eziphambili zaye zavula umatshini wokushicilela. Oko kuthathe ixesha kunye nomzamo, kodwa sele kulula. Eli phepha ke lidityaniswe kwimigodi yegolide. Yaba ngumgangatho wegolide. Umzekelo, ukushicilelwa kwemali kuhlala kunxulunyaniswa nesantya apho imigodi yegolide inokuthi igolide, ke uthintele ukuhla kwexabiso.
Njengoko imfuno yemali yayisanda njengoko abantu behlabathi bekhula kwaye urhwebo lukhula, lo mgangatho wegolide wayekwa ngaxa lithile. Yindlela yokusekwa kwe-OPEC. Le ntlangano yeoyile kwakufuneka inxibelelanise ukuveliswa kwemali kunye nemveliso yeoyile. Ke izivumelwano zehlabathi lonke zenziwa malunga nesixa semiphanda yeoyile enokuveliswa ngamazwe. Idola yayinxulunyaniswa nemveliso yeoyile, ke ukuba ufuna ukuprinta iidola, unokukwenza oko kuphela ngokomyinge weoyile.
Lo mgangatho weoyile kudala wakhutshwa kwaye ngoku akusekho kugubungela. Okwangoku, iibhanki eziphambili zenza 'imali ye-fiat'. Oku kuthetha ukuba abanazithintelo nakuphi na okuprinta imali kwaye kuba akukho siqinisekiso sokuba oku kuyayanyene nesantya igolide okanye ioyile enokukhutshwa emhlabeni, ukuhla kwexabiso lemali akunqandeki. Unokufumana ukuhla kwexabiso lemali ngaphakathi kwiveki e-1.
Ithetha ukuthini imali engakhuselekanga yokuqokelela?
Xa uqhelisela, oku kuthetha ukuba imali ikhawuleza ikhotyokiswe. Amakhulu ezigidi zeedola nee-euro zaprintwa ngexesha lengxaki yekorona. Oko kuthetha ukuba ezo dola neeyuros zixabiseke kancinane. Kungekudala, oku kuya kuchaphazela amaxabiso ezivenkileni.
Ngoku iibhanki eziphambili ziye zeza namaqhinga okufihla imali. Umzekelo, ukuba wena njengenkampani yezizwe ngezizwe uboleka imali ebhankini enkulu, loo bhanki inkulu iboleke loo mali kwibhanki ephakathi. Ezo bhanki ziphambili ziprinta imali ethe kratya (kunjalo, ayiprinteki, ziyalonyusa inani leenkqubo zekhompyuter yazo) ukuze zibuyisele ukhuseleko lwetyala (iibhondi, ubungqina betyala) kwezo zinto zininzi.
Ke masithi inkampani inetyala lezigidi ezili-100. Ukuba i-ECB ngoku ithengela ukukhuseleka kwetyala kuloo nkampani, injalo loo nkampani ifumene isigidi esiyi-100 yezigidi simahla. Leya nkampani inokuthenga izabelo zayo ngemali okanye ithenge ngaphezulu kwabo bakhuphisana nabo bokuwa.
Ngale ndlela uqinisekisa ukuba abantu abaninzi bacinga ukuba uqoqosho lusekwimo elungileyo. Ngokuziqhelanisa, nangona kunjalo, ubangele ngokukhawuleza izigidi ezili-100 kukuhla kwezezimali. Ngoku ikhulu lezigidi ezilikhulu ezilikhulu lamawaka ezigidi kuphela kwepesenti encinci, ke ukuba wenza intaba yetyala liphezulu ngokwaneleyo, isiphumo sokuhla kwexabiso kubonakala ngathi sincipha ngokwepesenti. Iibhanki eziphakathi ke zibonakala zikholelwa ukuba eziphezulu bazenza intaba, zincinci iziphumo zedrafti njengepesenti.
Yiloo nto esiyibona e-US ngoku, kwaye yile nto siyibona nayo eYurophu. Intaba yetyala inyuswe kakhulu. Nangona kunjalo, zonke iingcali zezezimali kwihlabathi liphela ziyavuma ukuba ukuhla kwexabiso lemali kuyehla.
Thelekisa oko kunye nengqekembe yegolide. Le ngqekembe yegolide ubuyifumene kwiveki ephelileyo xa uthengise ibhegi yeebhatata ixabisa phantse le veki, kuba igolide ayinakutyalwa ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, i-euro kwiakhawunti yakho yebhanki ilahlekelwa ngokukhawuleza lixabiso kuba imali eninzi iprintwe ngokukhawuleza kangangokuba ixabiso leeplothi ngokukhawuleza.
I-Bitcoin njengomgangatho wegolide omtsha
Umenzi ongaziwayo we-bitcoin uye weza nesisombululo esilumkileyo kakhulu esikhumbuza igolide.
Kufanelekile ukuba sithandabuze malunga nemali yengqekembe enjalo, kuba inika ithuba lokuba yonke intengiselwano ingalandeleka. Kwakhona isibakala sokuba iMicrosoft ngo-2019 patent 2020-060606 ifayilili ibonakalisa ukuba i-cryptocurrency inokunxulunyaniswa 'ne-intanethi yezinto'; apho thina ngokwethu sinokuba yenye yezo 'zinto'.
Ukanti sele sikwixesha lokulandelela imali yedijithali. Emva kwayo yonke, yimali onokufikelela kuyo nge-app okanye ikhadi lebhanki. Ngokupheliswa okutsha kwemali, ngoku sele sikwiwebhusayithi enokutsalwa edijithali. Ingxaki eyongezelelweyo ngaloo mali, ngalo mzuzu, kukuba ikhulisa ngokukhawuleza okukhulu.
USatoshi Nakamoto yimbonakalo yomntu ongaziwayo okanye iqela elenza i-cryptocurrency Bitcoin kwaye laseka idathabheyishini yokuqala ye-blockchain. Sinokuzibuza ukuba ngaba inkqubo yengozi ekhoyo ngoku ayicwangciswanga nje ukusiqhubela kwi-bitcoin njengomgangatho omtsha. Ngayo unokuzibuza ukuba uSatoshi Nakamoto akaveli nje kwiqela le-elite lamandla elifanayo.
Nangona kunjalo, inkqubo ye-bitcoin ikhulelwe ngobukrelekrele kwaye eneneni isekwe kumgaqo-siseko wokumbiwa kwegolide. Ukuze uthengise inani le-bitcoin, i-bitcoins kufuneka icocwe. Oko akunakwenzeka nge-spatulas kunye nefosholo esemhlabeni, efana negolide, kodwa oko ngeekhompyuter ezininzi ezikhawulezayo ezinamaxabiso aphezulu okuthenga kwaye zisebenzisa amafutha amaninzi (amandla). Oku kuqinisekisa ukuba ayinguye wonke umntu onokuvelisa i-bitcoins.
Inkqubo yokuvelisa i-bitcoins ibizwa ngokuba 'yimigodi', eneneni esikhumbuza igolide kwimigodi. Le nkqubo yemigodi iyathetha ukuba iicomputer kufuneka zisombulule ifomula yemathematics enobunzima obuninzi kangangokuba kungathatha iintsuku ukufumana isisombululo. Nangona kunjalo, ubunzima befomula bonyuka njengoko kukho iikhompyuter ezingaphezulu kwinethiwekhi. Ngakumbi abantu abaqala ukumbiwa, kokukhona kusiba nzima ukubala isisombululo.
Ngalo lonke ixesha ikhompyuter enjalo isombulule ifomula, kuyenziwa i-1 bitcoin. Njengokubulela oku kubalwa, umvukuzi ufumana inxenye yelo bitcoin njengomvuzo.
Ukuqhubela phambili umdlalo, umvuzo unqunyulwa kwisiqingatha seminyaka emine. Ukuncipha kwenzekile ngamathuba kule veki. Ngomhla we-12 kaMeyi ngqo. Ke ukuba ukwazile ukuba ngowam i-12 bitcoin ngaphambi kuka-Meyi, ubenayo i-x% kuyo. Emva kukaMeyi 1, eso sixa sisikwe kwisiqingatha. Oku kuthetha ukuba abanye abavukuzi abanakuthenga i "spatulas" entsha kunye "nefosholo" ukwenza umsebenzi wabo wokumba. Abasakwazi ukuhlawula amatyala ombane okanye bangasathengi iikhompyuter ezikhawulezayo ukuya zam. Bawela ngaphezulu.
Ukuba uyayiva ngale ndlela, unokucinga kwangoko: Oko kukhokelela kulawulo-melo. Oko kuthetha ukuba iinkampani ezityebileyo ziya kuphinda zibe zezona zimbiwa zinkulu kwaye kungekudala uyakufumana indawo ekumbindi apho konke okumbiwa kuqhubeka khona. Ibali, nangona kunjalo, ngokulahleka kweekhompyuter ezininzi kwinethiwekhi, ifomula yokubala nayo iyancipha ngokulinganayo. Oku kukhuthaza abavukuzi abatsha ukuba bathathe ii-spatulas kwaye baqale iifosholo.
Nangona kunjalo uyayijika okanye uyijika, uya kubona ukunyuka kwenqanaba apha kwaye kukho umngcipheko.
Nangona kunjalo, abatyali ngakumbi nangakumbi banomdla kumgaqo wokusebenza kwe-bitcoin, ngokuchanekileyo ngenxa yale nkqubo yokumba umgodi. Emva kwayo yonke loo nto, kukhumbuza ubunkimbinkimbi obususa igolide emhlabeni kwaye ke ithelekiswa nezo ziingqekembe zegolide zangaphambili kunye nesiqinisekiso esinxibelelene 'nokuqhekezwa kwexabiso lokuncipha'. Yiyo loo nto ubona ukuba ngoku kukho amakhulu amawaka ezigidi zorhwebo nge-bitcoin.
Ke i-Bitcoin inakho ukubumba umgangatho wegolide omtsha. Ingathi, ngokungathi kunjalo, ibonelele ngokuqokelelwa kuxinzelelo lwezezimali ekubeni sisilela ngenkqubo ye-fiat yangoku.
Qhagamshela imali kwi-bitcoin
Kwindlela yokubiza idemokhrasi ngqo izoshicilelwa izolo, Ndathetha ngokudibanisa imali kwi-bitcoin njenge "mgangatho wegolide". Ungathi imali kufuneka idityaniswe nento. Unokubuyela kwigolide yokwenyani ngokwenqanaba, kodwa ke kufuneka uqhubeke nokumba igolide emhlabeni kwaye oko akuhambi kakuhle kwindalo. Iikhompyuter ezilambela umbane nazo azilunganga kwimeko yokusingqongileyo, kodwa sibona ngakumbi nangakumbi iteknoloji ivela, enokuthi iveze umbane ngakumbi kokusingqongileyo kwaye ke ungathi ukhetho lukulungelwa "ngumgangatho wegolide".
Kucacile ukuba kuya kufuneka ukuba kubekho uhlobo lwe "mgangatho wegolide" kwakhona. Kungenjalo kuya kufuneka sijongane nokwehla kwexabiso lemali. Yiloo nto kanye eyenzekayo ngexesha lengxaki yekorona. Ukuseta kwakhona kumgangatho omtsha wegolide kufanele ke ukuba kukhatshwe kukuseta kwakhona kwipiramidi yamandla. Apho ngoku imigca ibaleka inyuka kwaye amandla amaninzi aya kwiqela elincinci elinobutyebi, amandla kufuneka eze ezandleni zabantu.
Ukubuyisela amandla ebantwini ngokuqinisekileyo kuya kuba yinto eyimbali. Oko akukaze kwenzeke embalini. Ukanti iteknoloji enye esekwe kuyo i-bitcoin, ebizwa ngokuba yi-blockchain, inika ithuba ukunika abantu amandla okuthatha izigqibo ngokuthe ngqo. Akunyanzelekanga ukuba uguqule ubume boluntu lonke, kodwa kuya kufuneka utshintshe ulawulo.
Umzekelo, unokuba noburhulumente obukhokelwe ngabefundisi abonyulwe ngabantu kwaye banike ingxelo ebantwini. Endaweni yokufunga ngokunyaniseka kwisithsaba, ngoku bafunga ngokunyaniseka ebantwini. Oku kufanele kusebenza nakwinkonzo yoluntu iphela nakuzo zonke iiprofessia ezifungelayo ngokuthobela itrone (abagwebi, amagqwetha, amapolisa, abahloli, abanyanzelisi, njl. Njl.).
Ewe awungekhe uxele yonke into kwaye uyazise ebantwini, ke inyathelo lokuthatyathwa kwenqanaba kufuneka lenziwe. Umbuzo ngowokuba ingaba amasuntsu angashukunyiselwa kolo tshintsho okanye siza kuphinda silinde de siqiniseke ngomnye wamawaka ezigidigidi njengo-Elon Musk kunye noBill Gates, apho siqhuba khona umngcipheko wokuba ikhonkco kunye ne-blockchain liza kuhamba kunye Ukunxibelelanisa ubuchopho bethu kuloo nkqubo okanye ukunxibelelanisa inkqubo enjalo nesatifiketi sokugonyela.
Ukuba kukho ithuba lokuqalisa utshintsho, ikho ngoku. Asifanele siphoswe lelo thuba. Nangona kunjalo, ukulungiselela loo nto kufuneka sizishukumise.
Ukuba sifuna utshintsho sinokwenza izinto ezimbini. Okanye silinde de ingxaki yemali ye-fiat ibe nkulu kwaye ukunyuka kwamaxabiso kube nzima kangangokuba i-bulwark efanayo yamandla isinika "umgangatho wegolide" omtsha njengesisombululo. Okanye siyaziphendulela.
Ngaba silindele ukunyuka kwexabiso lentengo ukuba liphezulu kangaka kwaye libe kwinqanaba lokulawula ngokupheleleyo iphiramidi yamandla kangangokuba akukho kubuya mva? Emva koko sinesiqinisekiso sokulawulwa kwetekhnoloji. Oko kukuthi, siya kudityaniswa ngazo zonke iindlela kwinkqubo esebenzisa itekhnoloji ukusenza amakhoboka edijithali.
Ukuba sikhethe ukuthatha i-reins ngokwethu, sinokubeka iibhuleki kwaye kwaye kunjalo sizuze kwicala eliluncedo lophuhliso lobuchwepheshe. Emva koko sinokubeka iibhuleki kuphuhliso lwasimahla lwe-AI kwaye sinokubeka iibhuleki kumbindi wamandla.
Umbuzo, ke, ngaba ithuba elikhoyo ngoku lanele ukuba likushukumise. Umbuzo ngowokuba ingaba ithuba lokuba kukho ukukhanya lanele ukukhuthaza amakhulu amawaka abantu abaxhomekekileyo.
Kulapho i-psychology yomntu iqala khona ukudlala, kwaye kulapho umceli mngeni uza khona ngenguquko yokwenyani kwi-mindset yabaninzi. Ngayiphi na imeko, ndifuna ukukwazi ukuzijonga esipilini kwaye ndiyazi ukuba ndenze konke okusemandleni am. Ithuba lilapho, amathuba akhoyo. Kufuneka sithathe nje kwaye siyenze. Ayifuni i-pitchforks kunye neebhola. Kuthatha kuphela inguqu kwiseti yengqondo yakho.
Ngenkqubo yokuvota ethe ngqo kwi-intanethi, singafaka iinkokheli ezitsha ezinika ingxelo ebantwini, zenze ukuba umthetho ucace kwaye ulula, ucime inkqubo yemali ye-fiat kwaye udibanise imali entsha kwi-bitcoin. Singayikhupha njengengafikelelekiyo okanye sinokuthi ukubetha singene kwaye sivumele isicelo eso ukuba sihambisane nentsholongwane. Uyangena?
Ukuhlaselwa okukhulu kwiwebhusayithi uMartin Vrijland, kodwa siza kuqhubeka!
Ukuphumla kwe-corona kukubi kakhulu kwimpumlo yakho: inkohliso yokuba inkululeko isondele
tags: Bitcoin, intlekele, dollar, euro, eziziimbalasane, fiat, imali, inkqubo yemali, umgangatho wegolide, ukunqunqa, ukunqunqa, ukunyuka kwamaxabiso, ioli, ukuhla kwexabiso, OPEC, Ukusetha kwakhona, gu qulelo, Satoshi Nakamoto, isatifiketi sokugonywa
13 Meyi 2020 kwi-11: 31
Fumana apha ukuba kutheni imigaqo-siseko ye-bitcoin igqibe ukuba iqine:
UBenzo Wakker wabhala wathi:
13 Meyi 2020 kwi-12: 14
Izicelo ezisayiniweyo, ezimbi kakhulu ukuba bambalwa abantu abenze le nto.
13 Meyi 2020 kwi-13: 46
Kuyenzeka ukuba abantu bathande ukukhalaza kwaye bathande ukuva ukuba yintoni engahambanga kakuhle, kodwa abafuni ukwenza umzamo wokuqalisa utshintsho. Ukuya kwindawo yokuvota rhoqo emva kweminyaka emine kwaye ubeke umnqamlezo kuyonwabisa, kufuneka uyeke ukwenza into - nangona kunjalo, oku kungangaphezulu kokutyikitya isicelo ukwenza intshukumo iqhubeke.
Ke abantu abakholelwa kutshintsho kwaye ngokucacileyo bayathanda ukuyekela ukuba ngaphezulu. Uninzi lwabantu abathi bavukile abenzi nto ngokuzilolonga.
Ukusuka 'ephethe ingxowa yeetshipi ngesandla' ukuya kwi-DWDD, ukuya 'ephethe ingxowa yeetshipi ngesandla' ujonge kuJensen lilo kuphela utshintsho olubonakalayo 😉
13 Meyi 2020 kwi-14: 17
Ewe, ukugxeka mhlawumbi okanye kufanelekile kum. Andilindelanga nto kubukhoboka. Ngokuqinisekileyo abafuni tshintsho kuninzi lwemali. Amakhoboka alungile kumakhoboka. Kwakunjani uxolo xa amakhoboka engazange aye esitratweni esoyika 'i-corona'. Ndiyakukhumbula konke ukuphumla ngoku, kodwa akakhathali ngokuziphatha kwaye kulungile. IMadurodam ayililo ilizwe lotshintsho kunye neenguqu. Le yimeko yamakhoboka kunye nengqondo yomthengisi apha.
Amakhoboka asalungile, ubuncinci izibonelelo zokuba likhoboka ngaphezulu kwezinto ezingalunganga. Kwakhona, ungakulibali ukuzingca kunye nokudinwa kwamakhoboka.
Martin, uligorha, uzama konke okusemandleni akho ukutsala ihashe elifileyo ..
13 Meyi 2020 kwi-15: 30
Amava am kukuba kunokuzivocavoca okungaphezulu kwingxowa yeetapile.
13 Meyi 2020 kwi-15: 40
Iitapile zinesimo esibonakalayo sokuba zihluma ngokwendalo. Ukuba ubeka loo ngxowa yeetapile emhlabeni, inenqwelo yonke egcwele iitapile kwiiveki ezimbalwa kamva. Ndicinga ukuba kufanelekile malunga nebhegi yamazambane. Ihashe elifileyo libali elahlukileyo 😉
13 Meyi 2020 kwi-15: 54
ngokuchanekileyo inqaku lam,
13 Meyi 2020 kwi-16: 12
Ihashe elifileyo lelinye ibali. Uxolo xa ndidibana nengcwangu kakhulu.
13 Meyi 2020 kwi-17: 18
Iyaqondakala ngokupheleleyo. Enkosi ngokubulela kwakho ngendlela.
Ndimele ndivume ukuba ndiyakhathazeka xa ndifumanisa ukuba akukho nto incinci emntwini, kodwa nangona kunjalo ndiza kuqhubeka ngethemba lokuba kuya kubakho incopho.
Ndiyamangaliswa ngokukodwa ukuba abantu bangakhathazi nokuzalisa isikhalazo kwaye cofa iqhosha. Yiyo kuphela imizuzwana engama-30 yokusebenza. Ngaba ukungakholelwa okanye uloyiko lukhulu? Nditsho kuwo onke la mawaka abalandeli Okanye ngaba ziimpawu nje zokuzonwabisa kunye neebhiya.
13 Meyi 2020 kwi-17: 28
Bambalwa abayiqondayo intsingiselo yemeko yangoku yezinto. Ukubona uqhagamshelo kunye neziphumo zezenzo ezithile kusadinga i-EQ / IQ ethile kwaye andithethi nje ngamakhoboka afakwileyo 'anesihloko' ngaphambi kwegama.
Umbono we-Helikopta ngoko uyimfuneko, ukubeka i-blinkers akukho lula. Ke andithethi ngamehlo okomona physical
13 Meyi 2020 kwi-17: 56
Ndicinga ukuba uninzi alifuni kudiza igama labo kunye neenkcukacha zedilesi. Ukoyikwa ngumqeshi wabo, 'umsebenzi', inkonzo yezokhuseleko i-AIVD njl njl ngethamsanqa siphila kumgaqo-siseko. Ukukhohlela. Amagorha kwiisokisi. Emva kwayo yonke loo nto, akufuneki ukuba kubekho umngcipheko kumakhoboka. Khawufane ucinge.
13 Meyi 2020 kwi-18: 00
Ndikhe ndanomhlobo “ongumhlobo” (umntu endimaziyo) owayengasebenzi ekhaya iminyaka. Ingcali. Ukhethekileyo kwicala: ukunxibelelanisa kunye nokuhlutha idatha evela kulwazi.
Ngamaxesha athile wayekwazi ukubuyela emsebenzini emva kwikhosi yokuzihlaziya.
Inkcazo yeprofayile: umfazi kunye nabantwana ngaphandle kwendlu uyathengisa.
Xa ndambuza ukuba kungcono - nalo lonke ulwazi analo malunga nendlela oorhulumente abahlola ngayo abantu - ukuhlalisa ematyotyombeni e-moor endaweni yokuthatha umsebenzi onceda ngokwenyani ukwakha Inkqubo enkulu (ehlaziya idatha), yayiyimpendulo yakhe: “Kulungile ukuba ndingatshintsha ngaphakathi. Kwaye ndaphantse ndaphelelwa yindlu. Ngoku ndingaphila apha ndiqhubeke nokuqhuba imoto yam ”.
Olo tshintsho lwangaphakathi alubonakali 😉
Aphi amagorha? Bakwizindlu zabo kwaye banokuqhubeka nokuqhuba iimoto zabo.
13 Meyi 2020 kwi-18: 23
Lo ayingomzekelo mhle womntu onamehlo angaqwalaseliyo kwaye angaqapheli ukuba wakhetha imigoqo yentolongo azizivalela kuyo ngokwedijithali?
13 Meyi 2020 kwi-15: 41
Apho eJamani naseFransi i-Kampfgeist isaphilile, iMadurodam imile kwaye ibekwe ngokomfanekiso. Ngegama elithi Resistance umntu ucinga ngotshintsho ..
13 Meyi 2020 kwi-15: 44
Faka imask yakho ukuba uya ngaphandle 😷
13 Meyi 2020 kwi-15: 42
Iibhubhu ziya kuqhuma, kwaye ukulunga kuya kulandela
mec wabhala wathi:
13 Meyi 2020 kwi-17: 48
Oko kushiyeka kugula emhlabeni okunamandla phezu kwethu kunengxaki enkulu ukuba ulahla i-smartphone yakho okanye bayeka ukusebenzisa loo nto, baphulukana nolawulo lwabo lwe-NWO phezu kwakho. Ngaphandle kwe-shit-esile epokothweni, abayi kuphinda bakwazi ukukujonga ukuba ungama-24/7 kwaye imali yabo ye-bubble yedijithali isemngciphekweni apho batyhalela wonke umntu.
Ke yeka loo mkhwa wokuziphatha umlutha kwi-smartphone yakho
Lace lesikhumba wabhala wathi:
14 Meyi 2020 kwi-08: 00
Kwam, akukho fowuni iya kunqunyulwa ngaphandle
13 Meyi 2020 kwi-18: 10
Inxalenye yenkxaso ye-corona isoyikisa ukuba kufuneka ibuyiselwe: 'Impazamo enkulu'
Ewe, ndicinga ukuba ayisiyompazamo enkulu le, kodwa ilingana ncam ne-ajenda yebrandberg yokutshabalalisa lonke udidi oluphakathi kwaye ilunikezele kurhulumente, ngoko ke makwenziwe into enye.
Ukusuka kuma-33: 10 uRutte: “Ndiyakholelwa kwimeko eqinileyo. Eli lizwe lifuna ilizwe elomeleleyo. ” 34:23 "SiliLizwe elingene nzulu ekuhlaleni."
Umrhanelwa oqhelekileyo uStiglitz ukhutshwa esitalini ukuze achaze izinto ezimbalwa, ngakumbi ukubekwa phambili. Ubusoshiyali sisango (lobuchwephesha) lobuKomanisi Uyalumkisiwe!
26 Meyi 2020 kwi-14: 18
Dat gaat wel goedkomen men manipuleert iedere dag het aantal zetels naar nieuwe hoogten.
“In de zetelpeiling van Ipsos en EenVandaag klimt de VVD naar 44 zetels.”
13 Meyi 2020 kwi-23: 57
uqale njani intshukumo https://www.youtube.com/watch?v=V74AxCqOTvg&t=81s
14 Meyi 2020 kwi-11: 56
Ihamba ngokukhawuleza kakhulu ngoku. Iprototype yeMac entsha. Kubandakanya into ekufuneka uyenzile, into ekufuneka uyichukumisile uku-odola (funda wonke umntu ehleli ngezandla zabo kolo phawu lwe-odolo, impazamo), thathela ingqalelo ukuhleka nalapho ukhona, kunye nendlela oziphethe ngayo. Phantsi kwembono yokubona konke kunye neyokwamkela yonke imehlo. Yintoni eyenye iliso, iliso lokufunda iliso le-AI. Ngokuqinisekileyo kufihliwe njengokucwina.
« Ixesha lotshintsho olukhulu kunye nokujika okukhulu: sayina uxwebhu lwezikhalazo
Ngaba kufuneka uthathe okanye uyaliwe iyeza le-Covid-19 ukuba ngaba kunyanzelekile? Kwenziwe ntoni? »
Utyelelo lulonke: 2.521.676
Ilanga op ICorona Crisis Covid-19 ikhumbuza 2003 i-Bl Blaster yintsholongwane
iifom op ICorona Crisis Covid-19 ikhumbuza 2003 i-Bl Blaster yintsholongwane